Sabuurka Waxaa loo soo xiray iyada oo loo ballan qaaday diyaarinta soo socoto. - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda al-Mudaththir (Surah 74 – Midkii Dhintay) ayaa sawiraya nebigii PBUH oo ku duudduuban guntigiisa isagoo siinaya digniino ku saabsan Maalinta Qiyaame ama xukunka.]
Kaaga dharka isku daboolayow, Kac iyoEebahaana isagaa kaynay
Suuradda al-Mudaththir 74: 1-3
Marka la afuufo suurka, Maalintaasu waa maalin uur daran.
Suuradda al-Mudaththir 74: 8-10
Suuradda Al-Kafirun (Suuradda 109 – Gaaladu) waxay sawirayaan nebiga PBUH oo si cad ugu yeeraya dariiq ka duwan kuwii gaalada.
Waxaad dhahdaa (Gaaloow) anigu caabudin maayo waxaad caabudid. Ee miyaydaan caabudin waxaan caabudiyee, umana noqonaysid waxaan caabudno waxaad caabudaysaan. Aniguna aniga ayaa ah diinteyda.
Suuradda Al-Kafirun 109: 1-6
Sabuur wuxuu xirayaa isagoo tixraacaya Nebi Ilyaas PBUH oo isagu si sax ah u sameeyay sida Surah al-Mudaththir iyo Surah al-Kafirun lagu tilmaamay. Laakiin Zabuur sidoo kale waxay rajeyneysaa imaatin kale oo Nebi la mid noqon doona oo Eliyaasna qalbiyadeenna u diyaarin doona. Waxaan u naqaanay inuu yahay Nebi Yaxye PBUH.
Imaatinka Nebi Yaxye (PBUH) ayaa la sii sheegay.
Waxaan soo aragnay astaanta ah addoonka ,kaasoo ah adoonkii la balan qaaday inuu imaanayo. Laakiin ballan qaadkan oo dhan ee ku saabsan imaatinka ayaa noqotay suaal isku dheeli tiran oo muhiim ah. Ishacyaah 53 wuxuu ku bilaabay su’aal isagoo leh:-
Kumaa rumeeyey fariinteenna…?
Ishacyaah 53: 1a
Ishacyaah (PBUH) wuxuu sii saadaaliyay in Addoonkan aan si dhaqso ah loo rumaysan doonin, dhibaatadu kuma xirnayn farriinta ama calaamadaha addoonka maxaa yeelay waxay noqon doonaan kuwo sax ah waqtiga ay ku socdaan wareegyada ‘Toddobada’ sidoo kale magac iyo tilmaamid ama cayimidda ‘waa laga goyn doonaa’. Dhibaataduna ma ahayn mid wadata calaamado ku filan. Maya dhibaatadu waxay ahayd iyadoo quluubta dadka adkayd. Sidaa daraadeed qofbaa loo baahnaa inuu yimaado ka hor inta uusan imaanin adoonka si uu dadka ogu sii diyaariyo imaatinkiisa. Sidaa aawadeed nebi Ishacyaah (PBUH) wuxuu farriintiisa ku saabsanay qofka Addoonka u diyaarin doona jidka ku qoray buugiisa sida soo socota oo leh:-
3 Waxaa yeedhaya mid qaylinaya codkiis oo leh, Jidkii Rabbiga cidlada dhexdiisa ka hagaajiya, oo lamadegaanka dhexdiisa jid weyn Ilaahayaga aawadiis uga toosiya. 4 Dooxo walba kor baa loo qaadi doonaa, oo qar iyo buur walbana waa la gaabin doonaa, waxa qalloocanna waa la toosin doonaa, oo meelaha xunxunna waxaa laga dhigi doonaa bannaan siman, 5 oo waxaa la muujin doonaa ammaanta Rabbiga, uunka oo dhammuna
Ishacyaah 40: 3-5
Ishacyaah (PBUH) wuxuu qoray wax ku saabsan qof u imaan doona ‘cidlada dhexdeeda’ inuu ‘Rabbiga jidkiisa u diyaariyo’. Qofkani wuxuu hagaajin doonaa caqabadaha si ‘ammaanta Rabbiga loo muujiyo’. Laakiin Ishacyaah ma uusan sheegin qaabkan loo samayn doono.
Nabiga Malaakii – Nabigii ugu dambeeyay (Axdigii hore) Zabur
Nebiyadii Ishacyaah, Malaakii iyo Eliiyaah (PBUT) ayaa lagu muujiyey jadwalka taariikhda
Qiyaastii 300 oo sano kadib Ishacyaah ayaa yimid Malachi (PBUH) oo qoray buugga ugu dambeeya ee Sabuur (Axdigii hore) . Buuggan ugu dambeeya ee Malaakii (PBUH) wuxuu ishaaciya ka hadlay waxa ku saabsan Diyaariyaha iman doono, waxaana qoran:-
Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Bal eega, waxaan soo dirayaa wargeeyahayga, oo isna jidka ayuu hortayda ku sii diyaargarayn doonaa. Oo Sayidka aad doondoonaysaanna dhaqsiyuu macbudkiisa u iman doonaa, oo bal eega, wargeeyihii axdiga oo aad ku faraxdaanna wuu imanayaa.
Malaakii 3: 1
Mar kale ayaa halkan lagu sii sheegay kii jidka hagaajin lahaa ama diyaarin lahaa.Imaatinka diyaariyaha jidka ka dib,Waxaa imaan doonay fariintii Axdiga.Waa maxay Adiga uu tilmaamayo (PBUH) ? Xusuusnow in nebi Yeremyaah (PBUH) uu sii sheegay in Allah uu axdi cusub oo qalbiyadeena ku qoran sameyn doono.Markaana waan awoodi karnaa inaan xasilino harraadkeena oo had iyo jeerba noo horseedaya dembi. Taniwaa axdi la mid ah tan uuMalaakii (PBUH) tilmaamaayo.Helitaankaa axdigaas ayaa ah calaamadda imaatinka diyaariyaha jidka.
Ka dib Malaakii (PBUH) wuxuu Axdigii hore ku soo xiray cutubka ogu dambeeyo ee buugiisa.ka dib wuxuu kuxiraayaa Zabur dhan cutubkii ugu dambeeyay ee buugiisa. ugu dambeeynaa wuxuu markale Cutubkaasi eegayaa mustaqbalka, waxna qoran:-
Bal eega, maalinta weyn oo cabsida badan oo Rabbigu intaanay iman waxaan idiin soo diri doonaa Nebi Eliiyaah. 6 Oo isagu aabbayaasha qalbigooda ayuu u soo jeedin doonaa carruurta xaggooda, oo carruurta qalbigoodana wuu u soo jeedin doonaa aabbayaasha xaggooda, si aanan u iman oo dhulka inkaar ugu dhufan.
Malaakii 4: 5-6
Muxuu Malachi (PBUH) ula jeedaa ‘Eliiyaah’ inuu yimaado kahor maalinta weyn ee Rabbiga? Kumaa Eliyaas ahaa? Wuxuu ahaa nin kale oo aanan eegayn (ma eegi karno dhammaan nebiyadii Sabuur maxaa yeelay tani aad bay u dheereysaa laakiin waxay ku arki kartaa jadwalka waqtiga kor ku xusan). Ilyaas (PBUH) wuxuu noolaa 850 sano kahor. Wuxuu caan ku ahaa degganka cidlada dhexdeeda iyo xirashada dharka timaha xayawaanka iyo cunista cuntada duurjoogta ah. Waxaa laga yaabaa inuu u muuqdo mid si gaar ah u muuqda. Malachi (PBUH) wuxuu qoray in si la mid ah Diyaargarowga kahor imaatinka axdiga cusub wuxuu la mid noqon doono Eliyaas (PBUH).
Hadalkaasna, Zabuur(Aaxdigii hore) dhammaaday. Kani waa farriinti ugu dambeysay ee Sabuuradda waxaana la qorey qiyaastii 450 BC. Taarax iyo Sabuur waxaa ka buuxay ballanqaadyo waxyaalaha iman doona. Aynu eegno qaar.
Dib u eegista Balanqaadyadii Tawraad & Zabur ee sugaya in la oofiyo
Nebi Ibraahim (PBUH) oo ku jira Calaamadaha Qurbaanka wuxuu caddeeyay in Buurta Moriah uu ku bixin doono’.Yuhuuddu weli waxay sugayeen dhamaadka Sabuur.tani si ay dhacdo ogu ahaato.
Nebi Muuse (SCW) wuxuu yiri Iiddii Kormaridda waxay calaamad u tahay reer binu Israa’iil, oo reer binu Israa’iilna waxay u dabaaldegeen Iidda Kormaridda taariikhdooda oo dhan laakiin waxay hilmaameen taas, inay tahay calaamad, oo aan weli la muujin.
Nebi Muuse (PBUH) oo ku sugan magaalada Tawraad wuxuu sii sheegay in nebi u imaan doono kii Ilaahay ku yidhi, “Erayadayda ayaan gelinayaa afkiisa”. Allah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ballantaas ee ah Nabiga soo socda,”Aniga qudhaydu aay u yeeri doonaa oo la xisaabtama qof kasta oo aan dhegaysan erayadayda uu nebigu kaga hadli doono magacayga”.
Boqor Daauud (PBUH) wuxuu sii sheegay imaatinka ‘Masiixa’ ama ‘Masih’. Taariikhdooda dheer ee reer bin Israa’iil waxay la yaabi jireen xukunka boqortooyadan ‘Masiixa’.
Nebi Ishacyaah (PBUH) wuxuu sii sheegay in gabadh bikrad ah dhali doonto ‘wiil‘. Dhamaadka Zabur Yuhuuddu wali waxay sugayeen dhacdadan cajiibka ah inay dhacdo.
Nebi Yeremyaah (PBUH) wuxuu saadaaliyay in Axdi Cusub, oo ah mid qalbiyadeenna lagu qoray halkii kan lagu qori lahaa kiniiniyada, uu imaan doono maalin uun.
Nebi Sekaryaah (PBUH) wuxuu saadaaliyay magaca soo socda ee ‘Masiix’ (ama Masih).
Nebi Daanyeel (PBUH) wuxuu saadaaliyay in markii Masiixu (ama Masih) yimaado uu ‘laga goyn doono’halkii laga xukumi lahaa sida ugu badan ee loo malaynayo inay dhici doonaan.
Nebi Ishacyaah (PBUH) wuxuu qoray wax ku saabsan imaatinka Addoon ‘ aad u xanuunsan doona oo’ laga gooyn doono kuwa nool ‘
Iyo sida aan halkan ku aragnay, nebi Malaakii (PBUH) wuxuu saadaaliyay in waxaas oo dhan ay ka horreeyaan Imaatinka Diyaariyaha. Isagu waa inuu diyaariyo quluubta dadka maxaa yeelay qalbiyadeenna si fudud ayaa loogu qalqalloocayaa waxyaalaha Ilaah.
Markuu ku dhowaa sabuurka sanadkii 450 BC dadka Yuhuuddu waxay ku noolaayeen filasho dhammaystirka ballanqaadyadan cajiibka ah. Oo iyana way sii sugayeen oo sugayeen. Qarni baa mid kale beddelay ka dibna kuwo kale ayaa imanaya – oo aan fulin ballamihiias.
Wixii dhacay ka dib markii Zabur (Axdigii hore) dhammamaaday.
Sidaan ku aragnay Taariikhda reer binu Israa’iil, Alexanderkii weynaa wuxuu ka adkaaday intii ogu caansaneeyd sanadihii 330 Ciise ka dib guulahaasna dadka iyo ilbaxnimada aduunku waxay qaateen luuqada Griiga. Maaddaama Ingiriisigu yahay maanta luuqad guud oo loogu talagalay ganacsiga, waxbarashada iyo suugaanta, waagaas Giriiggu sidaas oo kale ayaynu u badnaayeen. Macallimiinta Yuhuuddu waxay tarjumeen Tawraad iyo Zabur Cibraaniga af Gariig qiyaastii 250 BC. Tarjumaaddaas waxaa loo yaqaan Septuagint. Sidaan halkan ku aragnay, halkan waa meeshii erayga ‘Masiixu’ uu ka yimid waxaanan halkan ku aragnay in magaca ‘Ciise’ uu isna ka yimid halkaa.
Intii lagu jiray waqtigan (300 – 100 BC oo ah xilliga buluugga ah ee lagu muujiyey jadwalka) waxaa jiray tartan militari oo socda oo u dhexeeya Masar iyo Siiriya iyadoo reer binu Israa’iilna ay dagan yihiin inta u dhaxaysa labadan boqortooyo si joogto ah dagaallada ayey ku qabsadeen. Qaar ka mid ah boqorrada reer Siiriya waxay rabeen inay ku soo rogaan diinta Griig (diin sanam caabudid) oo reer binu Israa’iil ah oo ay tirtiraan cibaadadooda hal Ilaah. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu waxay horseedeen kacdoon si ay u difaacaan caqiidotooda isla markaana u soo celiyaan daahirnimadii cibaadada ee uu aasaasay Nebi Muuse (PBUH). Hoggaamiye-diimeedyadu ma ahaayeen fulintii ballamihii ay Yuhuuddu sugayeen? Nimankan, in kasta oo ay ahaayeen kuwa daacad u ah cibaadada sida loogu sheegay Tawreed iyo Sabuur, haddana kuma habboonayn calaamadaha nebiyada. Dhab ahaantii iyaga laftoodu xitaa ma aysan sheegan inay yihiin nebiyo, oo kaliya Yuhuudda cibaadada u difaacday cibaadadooda ee sanam caabudidda.
Buugag taariikhi ah oo ku saabsan muddadan, oo sharraxaya halgannadaas oo ilaalin doona nadiifnimada cibaadada ayaa la qoray. Buugagani waxay bixiyaan aragti taariikhi ah iyo mid diineed waana kuwo aad u qiimo badan. Laakiin dadka yuhuuddu uma aysan tixgelin inay qoreen nebiyo sidaa darteedna buugaagtan laguma darin Zabuur. Waxay ahaayeen buugaag wanaagsan, oo ay qoreen rag diiniya, laakiin ma aysan qorin nebiyo. Buugaagtan waxaa loo yiqiin Apocrypha.
Laakiin maxaa yeelay buugaagtan waxtarka leh waxaa badanaa lagu daraa Tawraad iyo Sabuur si ay u bixiyaan taariikh dhameystiran oo dadka Yuhuudda ah. Injilka iyo farriinta Ciise masiix (PBUH) ka dib markii la qoray buugaagta Tawraad, Zabur iyo Injil ayaa lagudaray kitaab ama Bible. Qaar ka mid ah Baybalka maanta ayaa xitaa ku dari doona buugaagtan Apocrypha, in kastoo aysan ka mid ahayn Tawraad, Zabur ama Injil.
Laakiin ballanqaadyadii lagu bixiyay Tawraad iyo Zabur weli waa la fuliyay. Raacitaanka Gariigta kadib Boqortooyada Roomaanka ee awooda badan ayaa balaarisay isla markaana badalay Gariiga si ay u xukumaan Yuhuudda (kani waa xilliga jaalaha ah ee yimaada kadib buluugga waqtiga jadwalka kore). Roomaanku wax bay u xukumaan si hufan laakiin si adag. Canshuurahu way sarreeyaan reer Roomaana uma dulqaadan wax diidmo ah. Dadka Yuhuuddu waxay weligood sii jeclaayeen dhammaystirka ballamihii ay ku bixiyeen Tawraad iyo Zabur, in kasta oo ay muddo dheer sugayeen cibaadadooduna waxay noqotay mid adag oo waxay soo saareen xeerar badan oo dheeri ah oo aan ka ahayn nebiyadii laakiin xagga caadooyinka. ‘Amarada’ dheeraadka ah waxay u muuqdeen sidii fikradaha wanaagsan markii ugu horreysay ee la soo jeediyo laakiin waxay si dhakhso ah u beddeleen amarradii asalka ahaa ee Tawraad iyo Zabur qalbiyadii iyo maskaxdii macallimiinta Yuhuudda.
Kadibna ugu dambeyntii markii ay umuuqatay in laga yaabo inay yaboohyadii ilaahay hilmaameen, malaa’ig xoogga weyn Jibriil (Jibriil) wuxuu u yimid inuu ku dhawaaqo dhalashada muddo sugayay ee Diyaariyaha. Waxaan u naqaanay maanta inuu yahay Nebi Yaxye (ama Yooxanaa Baabtiisaha – PBUH). Laakiin taasi waa bilowgii Injil, oo aan hadda eegi doono.
Tags:Goor dhaw oo ah Zaburnebi Eliishaah ee zaburnebi isaiah ee zaburnebi malachi ee zaburnebi malachi pbuh ee zaburnebi yahyanebiyadii zaburnebiyadiina waxay ka mid ahaayeen zaburoo ahaa nebi yahyaoo buugaag ku yaal al kitaboo qoray zaburQeyb la'aan Tusmada al-kitabsheegidda Yahya ee zaburWaxsii sheegyada Zaburyahya ee zabur